''Waxaan qaataa 57 xanuun baab'iye maalinkii si aan u mirqaamo'' - BBC News Somali
''Waxaan qaataa 57 xanuun baab'iye maalinkii si aan u mirqaamo''
Image caption Kiniiniga Tramadol
Bishii December ee 2017 haweeney u dhalatay dalka Britain oo lagu magacaabo Laura Plummer ayaa lagu xukumay saddex sano oo xarig ah ka dib markii lagu helay 300 oo ah kiniinka xanuun baab'iyaha nooca loo yaqaano Tramadol oo ay keentay dalka Masar.
Iyada oo xukunka lagu riday ay argagax ka muujiyeen dad badan oo ku sugan UK ayaa hadana waxa ay arrintan bidhaamisay dhibaatada dadka la qabatimay kiniiniga xanuun baab'iyaha kuwaasi oo dhan malaayiin qof oo ku nool dalka Masar.
"Markii aan jiray 15 sano, waxa an ciyaari jirnay ciyaarta PlayStation ,qof ayaa i aflagaadeeyay anaga oo ciyaarayna ka dibna inta aan bir qaatay ayaan madaxa uga dhuftay.
Cabdul Xamiid, waxaa uu imika jiraa 24 sano, waxa uu xusuustaa markii uu xaqiiqsaday in la qabsiga uu la qabatimay daroogada ay faraha ka baxday.
Isaga oo jira 13 sano,waxa uu isku dayay oo uu markii ugu horeysay tijaabiyo kiniiniga xanuun baab'iyaha ee loo yaqaano Tramadol.
Si la mid dhalinyaro badan oo reer Masar ah wuxuu bilaabay in uu hal kiniini ah oo 100gm u qaybiyo afar meelood ka dibna hal qayb isticmaalo si uu ugu mirqaamo.
Lahaanshaha sawirka Ahmed Maher
Image caption Abdul Hameed, waa 24 jir, waxa uuna kiniiniga Tramadol isticmaalayay tan iyo markuu 13 jir ahaa
"Waxa aan dareemay in aan aniga dadka ugu sareeyo oo aan samayn karo wax waliba".
Marka uu Cabdul Xameed ciyaaraha Komputarka uu dheelayo waxa uu maalinkii qaadan jiray oo isticmaali jiray 57 ah kiniiniga xanuun baab'iyaha oo ah isku jir sida nooca Tramadol iyo noocyada kale ee xanuun baab'iyaha.
Waxa uu isticmaalay in ka badan intii loogu talagalay waxa uuna marar badan ku sigtay dhimasho.
'Runta murugada leh'
Sida ay sheegtay hay'adda xakamaynta daroogada iyo daawaynta dadka la qabatimay daroogada qof ka mid ah saddxdii qof ee reer Masar ayaa la qabatimay daawadan - taasi oo macnaheedu tahay 30 milyan oo ka mid ah dadka reer Masar in ay la qabatimeen kiniiniga xanuun baab'iyaha.
Dadka dalkaasi ayaa waxa ay door bidaan kiniiniga xanuun baa'biyaha nooca Tramadol.
Kiniiniga ayaa markii ugu horreysay soo galay suuqyada masar 20 sano ka hor .
Maadaama uu ka raqiisan yahay daroogada nooca heroin islamarkana si sahlan loo heli karo ayaa waxaa uu si dhaqso ah ugu baahay bulshada dhexdeeda oo waxaa la qabatimay dad badan.
Kiniinkan looma isticmaalo oo kali ah in xanuunka uu wax ka taro, balse waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in fikirka iyo walwalka la isaga yareeyo.
Kiniiniga xanuun baab'iyaha nooca Tramadol ayaa waaxda loogu talagalay in ay ka jawaabaan taleefoonada dadka doonaya in laga caawiyo la qabsiga daroogada waxa ay sheegeen in maalinkii ay helaan 500 oo wicitaan oo ah dad doonaya in laga caawiyo sidii ay u joojin lahaayeen daawadani.
Iibsiga Viagra: Maxaad u baahan tahay in aad ogaato?
Dad la qabatimay ayaa inta badan ah dhalinyaro, sida ay sheegeen saraakiisha xarunta ay dowladda maamusho oo lagu dhaqan celiyo dadka la qabatimay daroogada.
Saraakiisha xaruntan oo ku taala magaalada Qaahira ayaa BBC u sheegay in kala bar bukaanada halkaasi yimaada ay da'dooda u dhaxeyso 21 jir ilaa 30.
Image caption Briton Laura Plummer ayaa saddex sano oo xarig ah lagu xukumay ka dib markii lagu qabtay 300 oo ah xanuun baa'biyaha Tramadol dalkaasi Masar
Sida ku cad daraasad rasmi ah dadka la qabatimay xanuun baab'iyaha nooca Tramadol dalkaasi Masar ayaa u badan rag.
Ku dhawaad 70% ayaa ah rag- balse waxaa sidoo kale jira tira sii kordhaysa oo ah haween la qabatimay xanuun baab'iyaha.
Axlam oo ah hooyi da'yar ayaa bilaawday qaadashada xanuun baab'iayah Tramadol si ay u xakamayso fikirka ay kala kulanto shaqada adag ee guriga iyo xanaanada cunugeeeda.
Si la mid ah Cabdul Xameed waxa ay ku bilawday tira yar oo kiniini ah , balse si dhaqso ah ayay u sii badatay tirada kiniiniga ay isticmaasho oo gaartay 4 xabo maalinkii islamarkana imika xitaa haddii ay badsato saamayntii ay horey jirkeeda ugu lahayd ma laha.
"Waxa aan u isticmaali jiray si aan awood uga helo, balse imika mirqaankii aan ka heli jiray ma laha "ayay tiray.
La qabsiga ay Axlam la qabsatay kiniinigan ayaa ka muuqata, waa caato u muuqata in da'deeda oo ah 28 jir ay ka wayn tahay.
Qoyskeeda ayay sidoo kale dhibaatada taabatay.
"Seygeeda ayaa i siiya lacag si aan hilib digaag ugu soo iibsado , waxa aan iska dhigayaa in aan caruurta ugu soo iibinayo wax ay cunaan,balse lacagta waxa aan u isticmaalaa in aan ku soo iibsado Tramadol , waxaana caruurta siiyaa baasto raqiis ah, tani waa runta murugada badan ." ayay tiri.
Axlam ayaa waxa ay iibsataa waxyaabo yaalla guriga qoyskeeda si ay daroogada ugu iibsato, waxaa taasi ka sii daran in mar nin daris la ah oo isna la qabatimay daroogada ay u bandhigtay in uu u galmoodo si uu ka dib u siiyo kiniiniga,balse uu diiday.
Sababta uu Tramadol u baahay
Mid ka mid ah sababaha uu xanuun baab'iyaha Tramadol caan uga noqday dalka Masar ayaa ah in si fudud lagu heli karo.
sharciyan waxaa laga iibin karaa oo kali ah qofka loo qoro waxaana farmashiyihii lagu arko isaga oo iibinaya iyada oo uusan qofka u qorin dhakhtar uu wajahayaa xabsi dhan 25 sano.
Balse dadka la qabatimay ayaa sheegaya in xannibaadahani si wayn la isaga dhagatiray.
Image caption Tramadol ayaa sharciyan dalkaasi masar waxaa lagu heli karaa in uu dhaktar kuu qoro
Dr Yasin Rajal, agaasimaha dhanka farsmada ee hay'adda maamusha arrimaha farmashiyooyiinka ayaa BBC u sheegay in wasaarada caafimaadka ay ogtahay halista xanuun baab'iyaha islamarkana ay wadaan dadaalo lagu xakamaynayo in si sharci daro ah loo iibiyo.
Balse xitaa haddii ay xukuumadda ka hor istaagto farmashiyayaasha iibinta xanuun baab'iyaha Tramadol ayaa waxa dadka isticmaala ay ku heli karaan qaabab kale.
Waxa loogu yeero "dhakhtarka dukaanka" ayaa imika ah arrin caan ka ah dalkaasi, dadka la qabatimay daawadan ayaa dhakhaatiirta uu sheegay dhibaatooyiin sida in uu dhaawac ka soo gaaray ciyaaro ka dibna la siiyo kiniiniga xanuun baab'iyaha.
Image caption Mid ka mid ah saddexdii qof ee ree Masar ayaa la qabatimay xanuun baab'iyaha
Arrintani waa suuqa madow ee markaasi lagu iibiyo kiniingaasi.